Itiyoophiyaa Keessatti Jijjiramni Hedduun Akkuma Jiru Danqaan Mudachuu Ibsamee Jira: | Kichuu
WASHINGTEN DC —(voaafaanoromoo)– Koreen Hoji-raaw’achiistuu ADWUI walga’ii isaa Idilee guyyoota afuriif geggeesse haala yeroo ammaa biyyattii keessa jiru gamaaggamuu dhaan har’a xumuramee jira.
Waajira ADWUI -tti Qindeessan Paartiilee Siyaasaa Waldaalee Siivilii fi Paartiilee tumsitotoaa – Obbo Fiqaaduu Tasammaa waa’ee walga’ii kanaa ennaa ibsan haala qabatamaa biyyatti keessaa kutaa sadiitti qoduun mari’ate jedhu.
Isaanis jijjirama biyyattii keessatti argaman, jabinaa fi laafina jiru akkasumas kallattii gara fuula duraa ta’u ibsan. Paartilee arfan paartii biyya bulchuu ADWUI uuman gidduu shakkii fi addaan qodamiinsi yaadaa hogganoota gidduu kan irratti mari’atame keessaa ta’uun ibsameera.
Kanneen jijjirama argame tumsan akkuma jiran kan duubatti deebisuuf tokkummaa biyyatti diiguuf kan hojjatan akka jiran kan ibsame yoo ta’u warri akkasii gocha isaanii irraa akka of-qusatan gaafatee jira.
Oromoon Biyya Keessas Ta’e Alaa Jiru Baankii Ofii Akka Jajjabeessu Gaafanna: Obbo Darribe Asfaaw
WASHINGTEN DC — (voaafaanoromoo)—Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa, tajaajila kennu lammiwwan biyya alaa keessa jiraatan akka itti fayyadaman haala miijessuuf biyyoota giddu galeessa bahaa fi Yunaayitid Isteetis keessatti hawaasa Oromoo waliin marii geggeessaa jira.
Sambata dabre Amajjii 12 bara 2019 Hawaasa Oromoo Waashington DC fi naannawa ishee jiran waliin mari’atee jira. Prezidaantii Baankichaa Obbo Darribee Asfaawu Hurrisaa akka ibsantti baankiin hojii gamtaa Oromiyaa bara 1990 nama Obbo Haayle Gabree Lubee jedhamaniin bu’urfamuu isaa ibsanii jiru.
Bu’aa Ba’ii waggoota dheeraa booda yeroo ammaa sadarkaa 3ffaa qabachuun hojii isaa gaggeessaa akka jiru dubbatan. Amantoota musleemaafis akka seera shariyaatti tajaajilli akka kennamu dubbatu.